Amandla emarike yeshishini lesithuthuthu se-sprocket akanakuthelekiswa nanto, okudala amathuba amahle i-China iye yangena kwinqanaba labavelisi abakhulu be-sprocket emhlabeni, kodwa ngokwembono yamandla ewonke kunye nenqanaba lophuhliso, imveliso nganye yonyaka ye-motorc ...
Uhlalutyo lweNkqubo yokuHamba kwaMaleko eCarburized ngexesha lokuqhubekiswa kweSithuthuthu iSocket
(1) Iiproliji zesithuthuthu esenziwe ngeCarburized zifuna umaleko owenziwe ngumzimba kumazinyo. Xa kusetyenziswa inkqubo ye "extrusion carburized-warm extrusion", ulwabiwo lwe carburized luhambelana kakhulu nendlela yokuguqula izixhobo zenziwe. Kwinkqubo yokuqhekeka okungafaniyo kwenkqubo, ...
Uxinzelelo kunyango lobushushu kunye nokuhlelwa kwe-sprocket yesithuthuthu
Uxinzelelo lonyango lobushushu lunokwahlulwa lube luxinzelelo lwe-thermal kunye noxinzelelo lwethishu. Unyango olushushu lonyango olusebenzayo lusisiphumo sokudityaniswa koxinzelelo lwe-thermal kunye noxinzelelo lwethishu. Imeko yoxinzelelo lonyango lobushushu kwindawo yokusebenza kunye nefuthe elibangelwayo lahlukile. Inani ...
Uhlalutyo lweNkqubo yokuHamba kwaMaleko yeCarburized ...
Uxinzelelo kunyango lobushushu kunye nokuhlelwa ...
Idolophu yaseShimenqiao, kwisiXeko saseRenqiu, kwiPhondo lase-Hebei, China
Ngama-86 317 2909666
Ngama-86 317 2908998